Jaaliyada Jubba Raas ee dalalka Scandina vianka oo Kulan Arimaha Jubooyinka ah ku qabtay Stockholm
Loading...	Home Wararka Jaaliyada Jubba Raas ee dalalka Scandina vianka oo Kulan Arimaha Jubooyinka ah ku qabtay Stockholm
Jaaliyada Jubba Raas ee dalalka Scandina vianka oo Kulan Arimaha Jubooyinka ah ku qabtay Stockholm	Saturday, 08 December 2012 23:57	Kulan Balaaran oo Jaaliyada Jubba Raas State iyo Madaxdooda iyo waliba Wakiilka Maamulka Udub land State,siyaasiyiin,Culumo Udiin,dhalinyaro iyo Haween ayaa shalay Galab ka dhacay Howlka shirarka ee Folkethus ka ee Xaafada Rinkeby ee Magaalada Stockholm.
Kulankaan ayaa waxaa uu ku bilowday jawi wanaagsan ayada oo khudbado halkaasi ka soo kala jeediyeen Madaxdii ka soo qeyb gashay waxaana kulanka ugu horeen ka hadlay Maxamed Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Waxaana Siyaasigu uu ka hadlay Tariikhda degaanada jubooyinka asaga oo sheegay in ay shacabka soomaaliyeed dhulkooda xejistaan islamarkaana Maamul uu deganadaasi yeesho ay ka imaan karto dadka degaanka.
Sidoo kale waxaa goobta Qudbad Qiimo badan ka soo jeedisay Wasiirada Haweenka ee Maamulka Jubba Raas satet Mrs.Ayaan Xaji Alifley Wasiirada ayaa aad uga hadashay degaanada Jubooyinka qas ahaan Magaalada Kismaayo oo sheegtay in ay dadkeedu yihiin kuwo Nabadeed islaamrkaasna qalalaasa alaga wado laga daayo.
Wasiiradu waxa ay Dowlada dhexe ugu baaqday in ay Gacan weyn ka geysato Marxaladaha degaanadaasi ee amni iyo Mid nololeed Waxaana Wasiiradu ugu baaqday in dadka jubooyinka gacmaha is qabsadaan Nabada ka shaqeyaan.
Wakiilka Maamul Goboleedka Udubland state ee wadamada Scnadinavianka Ciise Sheekh Cismaanciil ayaa sidoo kale khudab u badneed Marxalada deganadaasi ka hadlay asaga oo wakiilki si aad uga u bayaniyay dadka dega deganadaasi iyo Nidaamada gacan ku rimisyada ee laga suubiyano asaga oo sheegay in ay jiraan Maamul deganadaasi ka jira oo dadka degaanku lee yihiin.
Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay ilyees Muxudiin Xiriirshe oo ka mid ah dhalinayada degaanada Jubooyinka asaga oo sheegay in ay tahay wax lalayaabo in Maamul aan degaanka laga aqoon xoog lagu soo galsho ayada oo Dowladii dhexe la hareermarayo.
Waxuuna Ilyees sheegay in ay haboon tahay in dadka deganadaasi jooga ee soomaalida ah dadkooda gees ga racaan dowlada ku biraan asag oo sheegay in deganadaasi yihiin kuwo dadkooda Nabada jeceyl.
Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay Nimco Cumar roraaye afhayeenka haweenka Jaaliyada Jubba Raas ee Dalalka Scandinivianka ayada oo ugu baaqday dadka jubooyinka in ay wadajirka ilashadaan islaamrkaana uga digtay in aanan tafaraaruq lagalin.
Ugu danbeytii ayaa kulanka waxaa soo xiray Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubba Raas State Dr:Bashiir Muxmud Xaji Cismaan Waxaana Madaxweynuhu uu si qoto dheer uga hadlay xaalada jubooyinka asaga oo sheegay in Marxalad xasaasiyaha ay galeen jubooyinka loona baahan yahay in ay shacabka dagaanka iska ilalshaan tafararuqa ay wadaan kooxo yar oo dabada ka rixayaan dad aanan degaanka shaqo lu lahayn iyo kuwo shisheeye.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada Dowlada Federaalka ah wado asaga oo sheegay in Goboladaasi ay dadkoodu yihiin kuwo Nabadeed islaamrkaana wali nabad jeceyl.
Wuxuuna Madaxweynuhu uu ku soo cel celshay in aysan aqbaleen Maamulka uu Madaxda ka yahay wax uu laga soo dhoob dhoobayo dibadda waxaana uu Madaxweynuhu uggu baaqay Xukumada Kenya in ay ka joogsato dadka qaas ay tageerada waalida ah siineyso.
Ugu danbeyntii ayaa Mar Labaad sheegay hadii ay yihiin Maamulkoodu in ay soo dhaweynayaan dadaalada Nabadeed ee Dowladu wado asaga oo shacabka jubooyinka ku booriyay wada shaqeyn iyo waliba in ay si qayaxan ay isaga rixaaan uga hortagaan shirqoolada cadowga Deaganadaasi wadaan.
Comments (1)	asc	1
Tuesday, 11 December 2012 21:48	axmed yare	kismaayo waa dhul darood waxa ka qeelinyao xmar lagama yaabo ineey ka taliyaa asc
Comments (1) Waxaa Cusub